Helitaanka In ka badan 1.000 Sawirada Shakespeare ee Taariikhda Taariikhda | Abuurista khadka tooska ah
Fayl dijitaal ah oo waxaa ku jira 3.000 sawirro gebi ahaanba bilaash ah laga soo bilaabo xilligii Victoria ee Shakespeare ayaa hadda la heli karaa si loogu isticmaalo shaqooyinkaaga. Hab wanaagsan oo lagu helo sawirro tayo sare leh iyadoon loo eegin si loo hubiyo inay xuquuqdooda leeyihiin iyo in kale.
Mashruuca PhD ee ardayga ee Jaamacadda Cardiff wuxuu siinayaa farshaxanno awood ay ku galaan kumanaan nooc oo dijitaal ah oo taariikhi ah oo sawirada Shakespeare ah. Dhab ahaan waa qalin jabinta PhD ee suugaanta Dr. Michael Goodman oo ka dambeeya fur khadka tooska ah ee arjiga dijital ah.
Waxaa jira in ka badan 3.000 sawir oo laga soo qaaday afar nuqul oo waaweyn ka socota Shaqooyinka Dhammaystiran ee Shakespeare xilligii Victoria. Shakespeare's Illustrated Victoriaian Archive waxay ku martiqaadeysaa isticmaaleyaasha adduunka inay helaan qalab lagu raadiyo xariijinta sawirada ujeeddooyinka, sida saaxiradda, sheekooyinka ama cirfiidyada iyo qaybaha sida clowns, qalcadaha, fardo, boqorrada, dayaxa, muusikiyeyaasha, maraakiibta iyo seefaha.
Websaydhku wuu oggol yahay raadi mid kasta oo ka mid ah afarta daabacadood iyo helitaanka shaqooyin kasta oo shaqsiyadeed oo sawirro digitized ah nooc ahaan. Marka isticmaaleyaashu waxay ka heli karaan sawirro sheekooyinka sida Henry VIII, majaajillada sida Much ado badan oo ku saabsan dhowr sagaal, iyo musiibooyin sida Macbeth, Othello, iyo Romeo iyo Juliet.
Dhammaan waxyaabaha ku jira waa lacag la'aan iyada oo loo marayo Creative Commons Astaynta 3.0 Shatiga aan la soo dejin. Marka kaliya iskama dhex galin kartid sawirada qaabsocodka hal abuurkaaga, laakiin waxaad kula wadaagi kartaa shabakadaha bulshada bilaash.
Michael wuxuu u adeegsaday Photoshop inuu kala saaro sawirada, mid mid u iska baar oo u samee sumadaha ku habboon sawir kasta. Sida qofku qiyaasi karo, hawshu waxay ahayd mid dheer oo dhib badan, laakiin Michael wuxuu yidhi kaydku wuxuu noo ogolaanayaa inaan qadarinno sida shaqooyinku u egyihiin qol muraayadaha oo ka tarjumaya fikradaha qaarkood midba midka kale.
Waa tan adigu.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » In ka badan 1.000 sawir gacmeedyo Shakespearean ah oo bilaash ah oo laga soo dejisan karo
Sababo dhowr ah oo loogu talagalay kor u qaadista sawir-qaadaha 2017